प्रायः सोधिने प्रश्न - jiangxi टेक्सटाईल समूह छोटा सा भूत। कम्पनि लिमिटेड।
टिकाऊ फेसन पकेट-मैत्री आवश्यक छैन। के उपभोक्ताहरू समान समानको लागि खर्च गर्न चाहान्छन् कम ठाउँमा उपलब्ध छन्? के टिकाऊ फेसन मात्र एक प्रवृत्ति हो?
दिगो हुन धेरै तरिकाहरू छन्। त्यसो भए, यो धारणा कि टिकाऊ फेसन उच्च अन्त्य हो, यो सत्य होइन। अधिक र अधिक कपडा प्रस्तुत भैरहेको पर्यावरण अनुकूल छ र उच्च मूल्य छैन जरूरी छ। जस्तै, जैविक कपास जुन नैतिक रूपमा फार्म गरिएको हुन्छ र उत्पादन र विषाक्त र of्ग बिना र ofको हुन्छ। धेरै चोटि, सबैभन्दा ठूलो खर्च यो निर्मित तरिकामा हुन्छ।
त्यसोभए, प्रश्न उठ्छ, के मानिसहरू एक चीजको लागि अझ बढी खर्च गर्न इच्छुक छन् जुन राम्रो बनाइएको छ?
यो एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, किनकि यो हुन सक्छ कि शुरुआतमा कम मूल्यको वस्तु आकर्षक छ, तर त्यो वस्तु उस्तै तरिकाले बनाइने छैन, न त यसलाई पछि बढाइएको छ, न वातावरण संरक्षण गर्नुहोस्, र बनाएका मानिसहरूलाई विचार गर्नुहोस्। वस्तु।
त्यसोभए के मानिसहरू ढिलाइ भैरहेको भेगनमा उफ्रन इच्छुक छन्?
टिकाउ फेसन एक पारित प्रवृत्ति छैन। दिगो फैशन माथितिर ट्रेंड हुँदैछ, बिस्तारै तर पक्कै पनि, मानिसहरूले राम्रो निर्णय लिने र वातावरण र नैतिकतालाई विचार गर्ने रूपमा हेर्दछन्। वातावरण संकटमा छ। जब मानिसहरु अझ सचेत हुन्छन्, यसले तिनीहरु स्वयं र अरुको लागि, आज र भविष्यमा आफ्नो जीवन अझ राम्रो बनाउन गर्ने प्रयासलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। धेरै व्यक्तिहरूले केहि बनाइएको हो र के बनाइएको हो भनेर हेर्दछन्, तर जब एक आकर्षक चीज बाहिर उफ्रन्छ। तिनीहरूमा, ध्यान परिवर्तन हुन सक्छ। केहि मानिसहरु स्थानीय किन्नको बारेमा अड्काउँछन्, वा संयुक्त राज्य अमेरिका मा बनेको छ, कि एक विशेष ग्राहक हुनेछ। केही केवल कपास किन्न चाहन्छन्, त्यसैले त्यो अर्को हो। त्यसोभए, यो व्यक्तिमा निर्भर हुन्छ।
फेसनमा आपूर्ति श्रृंखलाहरू यति जटिल हुन्छन् कि वास्तवमा फेब्रिक के हो भनेर ठ्याक्कै जान्न धेरै गाह्रो हुन्छ, र जहाँ यसको उत्पत्ति, बनावट र उत्पादनको हिसाबले यो बनाइएको हो। त्यसकारण पारदर्शिता धेरै मानिसहरु लाई यति आकर्षक छ। त्यसोभए, उपभोक्ताहरू झन् झन् सचेत हुँदैछन्। यो शुरुको चरणहरूमा छ। यदि हामी खाद्य उद्योग कती टाढामा हेर्छौं, हामी बुझ्छौं, फेसनमा पनि त्यस्तै सुरू हुँदैछ। तेल र ग्यास पछि दोस्रो सबैभन्दा ठूलो प्रदूषकको रूपमा, फेसनले विशेष महत्त्व राख्छ। यो खाना जस्तै आधारभूत आवश्यकता पनि हो, त्यसैले उपभोक्ताहरूले अझ बढी कपडा जाँच गरिरहेका छन् भन्नेमा कुनै श checking्का छैन। मानिसहरु जान्न चाहन्छन् कि किन उनीहरुका कपडाहरुमा धेरै विषहरु छन् र किन कसैले सोच्छ, त्यो ठिक छ।